FAQs - China Golden Door Teknolojia Co., Ltd.
Biological Safety VHP Pass Box
Room Clean Air fandroana
Mist Shower or Fogging Shower
Clean Room Water Shower
Biological Safety Chemical Shower
Nuclear Medicine Lead Lined Doors
Linear Accelerator Lead Lined Shielding Doors
Hygienic Hinged Doors for Corridors in hospitals
automatic sliding hermetic glass ICU doors
Medical Use Scrub Sinks for Operation Theatres
Controlled Atmosphere Doors for fruits storage
Nuclear Radiation Shielding Doors
Q: Inona no Main fifaninanana Mahatsara azy?
A: namboarina Products Mafy orina Design sy ny Fampandrosoana Capability, mifaninana Price, za-draharaha Staff, haingana Response, Small Filaharana noraisinareo, haingana Delivery
Q: Inona no fanondranana tsena?
A: Asia Atsimo, Azia Atsimo Atsinanana, Afovoany Atsinanana, Afrika Atsinanana, Afrika Atsimo;
Q: Afaka mahazo ny famolavolana sy ny famantarana ny vokatra?
A: Eny, ny orinasa dia manolotra OEM & ODM asa fanompoana sy afaka ampanjifaina ny fepetra manokana. Misy fomba roa ny fiaraha-miasa.
1: Raha afaka manome ny famantarana sy ny endrika koa, vokatra ho vokatra araka ny famolavolana izy ka hitafy ny famantarana ihany koa. (OEM)
2: Eo ambany ity toe-javatra izay tsy afaka manome ny famolavolana, aza manahy, dia ho fanohanana teknika natolotra ihany koa, ny hevitra ny vokatra fampandrosoana ho tonga marina koa. (ODM)
Q: Inona avy ny vidin-javatra?
A: Ny vidin-javatra miovaova arakaraka ny isan-karazany takiana ho an'ny varavarana satria manome fanao nanao vokatra.
Q: Manana ny filaminana ambany indrindra dia be?
A: rehetra ny varavarana dia fombafomba atao toy ny isan-ny mpanjifa fepetra, ka tsy mangataka ny MOQ. Na dia varavarana iray, dia afaka manao izany ho anao.
Q: Afaka ianao OEM na ODM?
A: Eny, manana ekipa matanjaka fandrafetana. Ny vokatra dia azo atao araka ny fangatahana.
Q: Afaka manome ny taratasy manan-danja?
A: Eny, tena afaka manome tahirin-kevitra ao anatin'izany Certificates ny Analysis / Conformance; Insurance; Origin, sy ny antontan-taratasy fanondranana izay ilaina.
Q: Inona no mitarika eo ho eo ny fotoana?
A: Ny santionany, ny fe-potoana dia ny 7 andro. Fa bahoaka ny famokarana, ny fe-potoana dia 20-30 andro aorian'ny fandraisana ny fametrahana fandoavam-bola. Ny fitarihana mahomby fotoana lasa, rehefa (1) no nandray ny petra-bola, ary (2) manana ny fankatoavana farany ho an'ny vokatra. Raha ny firaka fotoana tsy miasa amin'ny fetra farany, masìna ianao, mba hita ny fepetra takiana amin'ny fivarotana. Amin'ny toe-javatra rehetra, Hiezaka isika mba handraisana ny zavatra ilaina. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra isika dia afaka manao izany.
Q: Inona no karazana fomba fandoavam-bola no manaiky?
A: Ny fandoavam-bola tsy tapaka teny dia T / T 30% toy ny petra-bola, T / T mahay mandanjalanja alohan'ny fanondranana. Isika koa dia manaiky hentitra no tsy miovaova L / C amin'ny fahitana.
Q: Inona no vokatra Warranty?
A: isika fiantohana ny fitaovana sy ny hafa. Ny fanoloran-tena dia ny fahafaham-po amin 'ny vokatra. Ao amin'ny fiantohana na tsia, dia ny kolontsaina izay namanay mba hiatrehana sy hamaha ny olana rehetra mpanjifa ny fahafaham-po ho an'ny rehetra
Q: manome antoka ve ianao azo antoka sy azo antoka fanaterana ny vokatra?
A: Eny, foana isika hampiasa tsara avo fanondranana fonosana. Koa izahay mampiasa loza fonosana manokana ho an'ny entana mampidi-doza sy nampanan-kery mangatsiaka fitehirizana shippers zavatra saro-pady noho ny hafanana. Specialist fonosana sy ny tsy faneva dia mety hiharan'ny fonosana fepetra fanampiny fiampangana.
Q: Ahoana ny momba ny fandefasana saram?
A: Ny vola sambo Miankina amin'ny fomba misafidy ny mahazo ny entana. Express no tokony haingana indrindra fa koa fomba lafo indrindra. Ny seafreight no vahaolana tsara indrindra ho an'ny be dia be. Izay indrindra ny tahan'ny entana azontsika ihany no manome anareo, raha fantatsika ny tsipiriany ny vola, lanja sy ny fomba. Mba andefaso olona izahay Raha mila fanazavana fanampiny.